Ahoana ny momba ny fiarovana ho an'ny olon-dehibe mitaingina scooter herinaratra? - Jomo Technology Co., Ltd
Ary ny herinaratra môtô lasa malaza safidy ho an'ny fialam-boly sy ny Fitness. Ny tanora mitaingina ny herinaratra mandanjalanja scooter , dia afaka mampihatra ny fifandanjana sy amin'ny endriky mahay, ary afaka hampiroborobo ny fampandrosoana ny cerebellum sy hampiroborobo ny fampandrosoana atidoha, hanatsara ny cardiopulmonary mivezivezy. Ao amin'ny dingan'ny mitaingina herinaratra mandanjalanja birao , satria mila foana ny mahay mandanjalanja ny tsirairay anjara hozatra ny tena amin 'ny toetra mafy asa, ny ankapobeny fifandanjana amin'ny alalan'ny hetsika, mba hanana ny sainy sy ny fanehoan-kevitra haingana, hampitombo ny manovaova ny vatana, manatsara ara-batana Fitness, manatsara ny faharanitan-tsaina, toy izany koa ny tena mahay mampifandanja scooter hetsika koa dia antsoina hoe ny "piozila lalao", dia afaka mamboly sy hanatsarana tanora mavitrika, matoky, tsy miankina, matanjaka, tia ady toetra.
Ny fandinihana voalohany dia ny fiarovana ny olon-dehibe, izay ihany koa ny fanalahidin'ny mahazo ny fanohanana ny fianakaviana, ary ny herinaratra tena mahay mampifandanja scooter no nividiananao na nandalo ny Ul 2272 fanamarinana na tsia, satria izany no mamaritra ny fiarovana.
1. Ny tena mahay mampifandanja hoverboard hetsika mampiasa hery ny hifehy ny tena fahaiza-mandanjalanja, izay mahatonga ny hozatry ny tongony sitrana sy hanatsarana be, tamin'izany andro izany, ny tongotra no tena be dia be ny hevitra tapaky ny vatan'olombelona, sy ny ambany takela--pototry amin'ny friction mbola hampirisihana ny Self ny mampifandanja ny Scooter mitaingina, dia afaka mahazo acupoint tairina, hanatsarana ny taova miasa.
2. Ao amin'ny dingana mitaingina, noho ny mizana foana, ny isan-karazany momba ny tena hozatra henjana, dia afaka manao ny sorony, andilany, tongotra, hato, hazondamosiko sy ny tonon-taolana no mora tezitra. Mba hanamafy orina ny fe-pahombiazana ny asa, ary mba hihazonana ny manovaova.
3. Long teny fitaingenana afaka hampiroborobo ny fifandanjana ny atidoha sy ny hozatra amin'ny endriky mahay, dia afaka manatsara ny kalitaon'ny be ny torimaso, mavitrika, feno tanora heriny, anti-fahanterana, mahomby hisorohana ny fisian'ny ny aretin'i Alzheimer.
4. Electric mandanjalanja scooter fanatanjahan-tena Fitness vokany, fa tsara ihany koa dia afaka mifehy ny lanja, hisorohana ny matavy loatra.
5. Electric mandanjalanja fiara hetsika dia tsy mahasoa ihany fanatanjahan-tena, na asa ara-tsosialy ny kanto, afaka manao namana vaovao, mba hanatanterahana ny hetsika isan-karazany,-karena ny afa-po amin'ny fiainana, manafoana sy hampihenana ny fahazaran-dratsy.